हामीलाई रोग किन लाग्छ ? थाहापाउनुहोस् – tvNepali.net
अहिलेको समयमा धेरै जसोलाई विभिन्न रोगले सताउने गर्दछ । नेपालमा पनि धेरै जना मानिसहरु रोगको शिकार हुने गर्दछन । यस्ता रोगहरु बाट अहिले पनि धेरै मानिसहरु मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । सानोतिनो रोग लाग्ने बित्तिकै मानिसहरु हस्पिटल धाउने गर्दछन तर उनीहरु यो सोच्ने गर्दैनन् कि हामीलाई रोग किन लाग्छ ।
यदि तपाई हामीलाई रोग किन लाग्छ भन्नेबारे चासो राख्नुहुन्छ भने यो पोस्ट तपाईको लागी हो । झिंगा भन्केका खाना खादा, बासी खानाहरु खादा पनि हामीलाई रोग लाग्ने गर्दछ । अरु थप जानकारीका लागी भिडियो हेर्नुहोला :
PreviousPrevious post:मोबाइलमा चार्ज टिक्दैन ? अपनाउनुस् यस्ता ७ उपायहरु
Next Next post:ट्रिपरको ठक्करबाट ११ बर्षिया बालिकाको मृत्यु : आक्रोशित स्थानीयले ७ वटा ट्रिपर जलाए
बलिउड अभिनेत्री प्रियंकाका व्याइफ्रेण्ड निक जोनासले आफुलाई यस्तो रोग रहेको गरे खुलासा
अभिनेत्री श्रद्दा कपुर पनि भईन् यस्तो भयानक रोगको शिकार